Farxan Caddawe Hadafow iyo Paralympics-ka Rio 2016 – Kasmo Newspaper
Farxan Caddawe Hadafow iyo Paralympics-ka Rio 2016
Updated - September 9, 2016 3:53 pm GMT
Farxan Caddaawe Hadafow waa 19 jir naafo ah oo ku dhashay xanuunka “Arthrogryposis Congenital Meaning” oo ah nooc dhif ah oo xubnaha iyo murqaha asiiba,waana cayaartoyga qur ah ee Soomaaliya uga qaybgalaya Olimbikada Naafada Rio 2016.
Wuxuu kula noolyahay eedadiis, ilaa 6 jirkiisii, bartamaha magaalada Torino ee dalka Talyaaniga,Xaafadda San Salvario,wuxuuna wax ka bartaa Machad Farsamo oo waaxda Arrimaha Bulshadu maamusho.
Xiisaha uu u qabo cayaaraha fudud wuxuu ku dhashay 4 sano ka hor,xilligii Olimbikadii London 2012kii,markii uu shaasahadaha ka daawaday cayaarihii dadka naafada ah.
Waxaa hadda gacan siiya Tababaraha Talyaaniga ah,Manuele Lambiase oo ka hawlgala Xiriirka cayaraha Naafada Talyaaniga ee xilliga qaboobaha FISIP (Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici).
Farxaan wuxuu ordaa 100ka mitir (Wheelchair Racing), oo maanta uu ka qaybgalayo,dhammaadkuna (Final) ku beeganyahay barri galab,saacaddu marka ay tahay 14:48,wakhtiga London.
Wuxuuna uga qaybgalayaa nooca “ T52 Classification” ee gaariga yar saaran, cagihiisa oo an xajin Karin dartood,isaga oo isticmaalaya gaari cabbirkiisa loogu sameeyay oo lagu qiimeeyay 6,500 oo Euro oo ay ku taageereen jaaliyado ay ka mid yihiin Soomaalida Torino.
Farxan wuxuu Talyaaniga u saftay 3 kulan oo tartanka naafada ee xilliga qaboobaha la qabto,wuxuuna markii u horreysay u safanayaa hadda dalkiisa hooyo,Soomaaliya,isaga oo waliba u wada calanka,xafladdii furitaanka.
Bishii May wuxuu codsaday dhalashada Talyaaniga,lamana hubo in cayaaraha soo socda, 4 sano ka dib,Olimbikada Tokiyo,uu Soomaaliya u safan doono iyo in kale.